कांग्रेस महाधिवेशनबारे गुप्तचरको विश्लेषण : शेरबहादुर देउवाको पक्षमा ६५ प्रतिशत भोट ! | Diyopost - ओझेलको खबर कांग्रेस महाधिवेशनबारे गुप्तचरको विश्लेषण : शेरबहादुर देउवाको पक्षमा ६५ प्रतिशत भोट ! | Diyopost - ओझेलको खबर
कांग्रेस महाधिवेशनबारे गुप्तचरको विश्लेषण : शेरबहादुर देउवाको पक्षमा ६५ प्रतिशत भोट !
दियो पोस्ट आइतबार, मंसिर २६, २०७८ | २२:४३:३०
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवासहित ४ जना नेताहरुले सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन् । राजधानीको भृकृटिमण्डपमा जारी महाधिवेशनमा नेताहरुले आ–आफ्नो शैलीमा प्रचार प्रशार गरिरहेका छन् ।
आइतबार महाधिवेशन स्थल भृकुटीमण्डप पुग्दा प्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नो पक्षका नेताहरुको पक्षमा चर्को नाराबाजी गरेका थिए । पार्टी सभापतिका उम्मेदवारहरु शेरबहादुर देउवा, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला र विमलेन्द्र निधिको पक्षमा प्रचार प्रसार तिब्र थियो । कार्यकर्ताहरु मध्ये सबैभन्दा धेरै नाराबाजी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै पक्षमा थियो ।
‘देउवा दाई, हाई हाई, सभापतिमा शेरबहादुर दाई’ भन्दै कार्यकर्ताहरुले चर्को नाराबाजी गरेका थिए । शेरबहादुर देउवाको पक्षमा काठमाडौं बाहिरबाट आएका कार्यकर्ताको समर्थन देखिएको छ । काठमाडौंकै कार्यकर्ताले भने प्रकाशमान सिंहको पक्षमा प्रचार प्रसार गरेका छन् ।
सोमबार बिहान ८ बजेदेखि हुने मतदानमा सभापतिका उम्मेदवारले ५१ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्छ । कांग्रेस महाधिवेशनमा कसले बाजी मार्ला भन्ने विश्लेषण शुरु भइसकेको छ । महाधिवेशन स्थलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जित्ने संभावना कत्तिको छ भनेर गुप्तचर विभागले गोप्य अनुसन्धान गरेको फेला परेको छ ।
विभाग स्रोतका अनुसार कांग्रेसमा चार हजार ७ सय ४३ महाधिवेशन प्रतिनिधि छन् । गुप्तचरको भित्रि अनुसन्धानमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै सभापतिमा जित्ने आंकलन गरिएको छ । महाधिवेशन स्थलमा आएका देशभरका प्रतिनिधिमाथि गुप्तचरका प्रतिनिधिले गरेको अनुसन्धानमा देउवाले ६५ प्रतिशत मत ल्याउने संभावना देखिएको छ ।
सात वटै प्रदेशमा सबैभन्दा बलिया रहेका देउवाको पक्षमा पहिलो चरणमै ५१ प्रतिशत भन्दा बढी मत आउने आकलन गुप्तचरका अधिकारीहरुको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाका लागि काठमाडौंबाट त्यति मत नआउने गुप्तचरले गरेको अनुसन्धानको विश्लेषण छ । काठमाडौं भित्रका महाधिवेशन प्रतिनिधिको रोजाइमा प्रकाशमान पर्नेछन् । यता प्रदेश २ बाट पनि देउवालाई राम्रो मत आउने छैन । तर, विमलेन्द्र निधि भन्दा देउवा नै बलियो रहेको ती अधिकारीको विश्लेषण छ । देउवालाई सुदुरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको ७० प्रतिशत मत आउने संभावना छ । त्यस्तै वागमती प्रदेशमा पनि देउवा नै बलियो उम्मेदवार छन् । केहीदिन अघि सम्पन्न बागमतीको अधिवेशनमा देउवा पक्षकै इन्द्र बानियाले सभापतिमा बाजी मारेका थिए ।
प्रदेश एकमा जम्मा ७ सय ३७ महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेको छ । जसमा देउवा सिटौला समुहलाई ३ सय ७० मत आउने अनुमान गुप्तचरको छ । बाँकी रहेको मत निधी, शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह र कल्याण गुरुङको पक्षमा विभाजित हुने अनुमान छ ।
प्रदेश नम्बर दुईमा ८ सय ८ जना मतदाता रहेकोमा देउवा सिटौलाको पक्षमा आधा हाराहारीको मत रहेको छ विभागको अनुमान छ । बाँकी रहेको आधा मतजना कोइराला, निधि, सिंह र गुरुङको पक्षमा विभाजित हुने अनुमान छ । उम्मेदवारी दर्ताका लागि भारतीय नम्बरका गाडी अघि पछि लगाएर स्कर्टिङमा पुगेका निधिको पक्षमा खास मतदाता नभएको विश्लेषण छ । उनलाई देउवा विरुद्ध भारतले नै खडा गरेको उम्मेदवारको रुपमा विश्लेषण भएको छ । त्यसले कांग्रेस मतदातामा देउवाकै पक्षमा माहोल बनेको विश्लेषण विभागले गरेको छ ।
बागमती प्रदेशमा जम्मा ८ सय ८० जना प्रतिनिधि छन् । जसमा देउवा र सिटौला समुहको ४ सय ८० मतदाता रहेको विश्लेषण छ । बाँकी रहेको ४ सय जना निधि, सिंह, कोइराला र गुरुङको पक्षमा विभाजित हुनेछन् । त्यसमध्ये पनि सिंह नै बलियो उम्मेदवार छन् । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका १८ क्षेत्रका ४७७ महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये देउवा–सिटौलाको पक्षमा २५२ र बाँकी २२५ जना कोइराला, निधि, सिंह र गुरुङको पक्षमा खुलेको विश्लेषण छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका २६ क्षेत्रका ६८३ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुमध्येमा देउवा–सिटौलाको पक्षमा २७४ र बाँकी ४०९ जना कोइराला, निधि, सिंह र गुरुङको पक्षमा रहेको गुप्तरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गरेको सर्भेमा उल्लेख छ । यो प्रदेशमा देउवा पक्ष कमजोर छ । तर, अन्य चार नेताको पक्षमा मत विभाजित भए देउवा नै बलियो उम्मेदवार बन्ने छन् ।
यता कर्णालीका १२ क्षेत्रका ३१६ प्रतिनिधिमा देउवाको पक्षमा २०५ र बाँकी १११ जना कोइराला, निधि, सिंह र गुरुङको पक्षमा विभाजित हुनेछन् । सुदुरपश्चिमका १६ क्षेत्रको ४१८ महाधिवेशन प्रतिनिधिमा देउवाको पक्षमा ३१३ र बाँकी १०५ जना कोइराला, निधि, सिंह र गुरुङको पक्षमा विभाजित हुने अनुमान छ ।
त्यस्तै केन्द्रीय समिति अन्तर्गत रहेका १०३ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुमध्ये ५२ जना देउवा–सिटौलाको पक्षमा र बाँकी ५१ जना कोइराला, निधि, सिंह र गुरुङको पक्षमा रहेको बताइएको छ । गुप्तचर विभागका अनुसार भातृ संघका १२६ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुमध्ये ७६ जना देउवाको पक्षमा र बाँकी ५० जना कोइराला, निधि र सिंहको पक्षमा खुलेका छन् । यसले भातृ संगठनमा पनि देउवाकै पकड देखिन्छ ।
जनसम्पर्क समिति अन्तर्गत रहेका १९५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु मध्ये ९७ जना देउवा–सिटौला पक्षमा खुलेका छन् भने बाँकी ९८ जना कोइराला, निधि, सिंह र गुरुङको पक्षमा खुलेको उक्त सर्भेक्षणमा उल्लेख छ ।
संगठनमा बलियो पकड रहेको देउवालाई पछिल्लो समयमा सिटौलाको समते समर्थन भएपछि उनको पक्षमा ६५ प्रतिशत मतदाता रहेको गुप्तचरको विश्लेषषण छ ।
आइतबार, मंसिर २६, २०७८ | २२:४३:३०